Igalelo leAmazon Echo, uhlalutyo ngexabiso kunye nokubalulwa | Iindaba zeGajethi
Igalelo leAmazon Echo, sihlalutya isixhobo esiziswa yi-Alexa kuso nasiphi na isithethi
Amazon Iyaqhubeka ukumilisela ngakumbi nangakumbi iimveliso ze "Echo", uluhlu lwenkampani yaseNyakatho Melika eyilelwe ukwenza idemokhrasi izixhobo ezigcina zonke izakhono Alexa. Ngaphandle kwamathandabuzo, oku kuphawula ngaphambi nasemva kokuthunyelwa kwe-IoT okanye iimveliso zekhaya ezifanelekileyo. Sikwacebisa ukuba ubone uhlalutyo lwethu Amazon Echo Spot kunye Amazon Echo Show ukuba ufuna ukwazi uluhlu olupheleleyo.
Sinezandla zethu Igalelo leAmazon Echo, siza kukubonisa ukuba iqulethe ntoni, ungayilungisa kanjani kunye nayo yonke into enokuyenza. Ke, hlala nathi kwakhona kuhlalutyo lweendaba lweGajethi entsha apho uya kuthi ufumane zonke iimpawu zesixhobo esitsha. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, lixesha lokuba uyisombulule.
Njengesiqhelo, olu hlalutyo lubhaliweyo lukhatshwa yividiyo apho uya kuba nakho ukubona khona "Unboxing" Kwaye ke onke amanyathelo ekufuneka uwalandele ukuba into oyifunayo kukucwangcisa iAmazon Echo Input ngendlela elula nekhawulezayo. Ngesi sihlandlo sihlalutya imodeli ngombala omhlophe ngokweenkcukacha, kodwa Ungayithenga kwakhona emnyama ukusuka kwi-24,99 euro (ngesaphulelo esilinganiselweyo se-euro ezingama-15) kule khonkco, ukuba ufuna ukuyijonga. Zenze ukhululeke kuba siqale ngohlalutyo.
1 Izixhobo kunye noyilo: Ngaphantsi kuninzi, iAmazon ithi
2 Iimpawu zobugcisa: Ngaphandle kokuphulukana nantoni na
3 Uyicwangcisa njani iAmazon Echo Input
4 Sebenzisa amava: Okuqhelekileyo, kuncinci
Izixhobo kunye noyilo: Ngaphantsi kuninzi, iAmazon ithi
Njengoko isihloko sithi, iAmazon iye yaqonda kwimeko ye Ungeniso lwe-Echo Okuncinci kuninzi, kwenzeka okufanayo nokhuphiswano oluthe ngqo, iGoogle Chromecast. IAmazon yakhe ngeplastiki eqinileyo isixhobo setyhula esime okwe Isosi ebhabha kuyathandeka ekuphathweni, emehlweni nakwingcamlo. Ilinganisa ngokuchanekileyo i-14 x 80 x 80 millimeters kwaye inobunzima obungenangqondo be-79 gram ukuba asizibali ezinye izongezo eziyimfuneko ekusebenzeni kwayo. Iplastiki iyafana ngokufanayo nezinye izixhobo ze-Echo kwaye ikwanesalathiso senqanaba se-LED.
Ubungakanani: X x 14 80 80 mm
Ubunzima: I-79 gram
Umxholo Iphakheji: Igalelo le-1x Echo -I-1x 5W i-Adapter- i-1x I-AUX Cable- i-1x iMicroUSB Cable
Siphezulu kunye amaqhosha amabini okhethekileyo okunxibelelana, enye ukucima imakrofoni ye-Echo Input kunye nenye ukusebenzisa ngokuthe ngqo isixhobo, esiya kuba yimfuneko kulungelelwaniso lokuqala okanye ukuqala kwakhona. Ngelixa kwinto eqondwa njenge icala elingasemva Sifumene uqhagamshelo lwe-microUSB (ewe, isekhona), kunye Indawo yokuphuma eyi-minijack eyi-3,5 mm. Ngokwengxenye yayo, isiseko sigutyungelwe umtya ojikelezayo wesilicone onika isixhobo ukuzinza okupheleleyo. Kwiphakheji sifumana intambo ye-AUX, intambo ye-microUSB kunye namandla e-5W, konke okuhambelana nombala wesixhobo esithengiweyo.
Iimpawu zobugcisa: Ngaphandle kokuphulukana nantoni na
Sifumene i-Alexa endala ngaphakathi kwesi sixhobo sincinci, ndiyazi ukuba kunzima ukukholelwa, kodwa umahluko kuphela kuzo zonke izixhobo ze-Echo kukungabikho kwesithethi. Sine-802.11ac yokunxibelelana kwe-WiFi, ethi kule meko inebala elincitshisiweyo, sicebisa ukuba singazami ukusebenzisa le Amazon Echo Input ngaphezulu kweemitha ezili-10 ukusuka kwinethiwekhi ye-WiFi, kwimeko apho kungenzeka ukuba impazamo yoqhagamshelo iphezulu kakhulu. Kwinxalenye yayo ikwanayo Bluetooth ngeeprofayili ze-A2DP kunye ne-AVRCP ukuphucula umgangatho weaudio.
Unxibelelwano olungenantambo: I-WiFi 801.11ac kunye neBluetooth
Unxibelelwano ngokwasemzimbeni: Intambo ye-AUX kunye ne-microUSB
Akukho khetho ngaphandle kokumamela kuthi, ke kunjalo Ii-microphone ezi-XNUMX ze-omni-direction. Asifumananga mahluko xa unxibelelana nesixhobo ngokubhekisele, umzekelo, i-Echo okanye i-Echo Spot. Ukuze uyiqwalasele kwayeKuyimfuneko ukuba unaso nasiphi na isixhobo esihambelana nesicelo se-Alexa, nokuba yi-iOS, i-Android okanye i-Fire OS.
Uyicwangcisa njani iAmazon Echo Input
Ungeniso lweAmazon Echo kulula kakhulu ukuba luqwalaselwe. Siza kukushiya ngezantsi kwamanyathelo ekufuneka uwalandele, nangona kunjalo Ndicebisa ukuba undwendwele ividiyo esiyishiye kwintloko Olu hlalutyo kuba yeyona ndlela ibalaseleyo kwaye ilula yokwenza.
Qhagamshela igalelo leAmazon Echo kuwo nawuphi na umthombo wamandla
Lindela ifayile ye izibane eziluhlaza ziyeke ukudanyaza
Nje ukuba zilungiswe, cinezela iqhosha lasekunene kwiAmazon Echo Input okungenani imizuzwana emi-6
Xa Isalathi se-LED sijika sibe-orenji yiya kwi-smartphone yakho kwaye uvule usetyenziso lwe-Alexa
Thepha kwikona ephezulu ngasekunene ukuya "Yongeza isixhobo"
Khetha igalelo le-Echo kuluhlu, cofa kwindawo elandelayo kwaye ulinde ukuba ivele
Khetha, kwaye Khetha inethiwekhi ye-WiFi ngoku apho uza kudibanisa khona, inokukucela iphasiwedi
Ngoku landela nje useto kucetyisiwe
Ngoku kufuneka sikhethe ukuba siyafuna yongeza isithethi ngonxibelelwano lweBluetooth, nakwisicelo se-Alexa, okanye sinokukhetha ukunxibelelana nesithethi nge-Amazon Echo Input yethu ngentambo ye-AUX kubandakanya ntoni.
Sebenzisa amava: Okuqhelekileyo, kuncinci
Ngokunyaniseka, ukuba unesitiriyo esihle kwaye ufuna ukubonelela ngesakhono sobuchwephesha ngokwalo nyaka sikuwo, yenye indlela ebonakala ngathi iphelele kwaye isebenza ngakumbi kunokhuphiswano. Yifake kwaye ukuyenza isebenze kulula ngokunyelisakananjalo Ayisweli naluphi na ukhetho lwe-Alexa, sinenguqulo epheleleyo yokumamela kumculo weSpotify, iindaba kwaye kunjalo silawule zonke izixhobo ezifanelekileyo ekhayeni lethu iyahambelana ne-Alexa.
Ewe esi sixhobo sinesibonelelo esongezelelweyo kwaye yiyo loo nto enkosi kubukhulu bayo obuncinci esinokuhamba nayo naphina apho sifuna khona, Ngapha koko, ukuba sinonxibelelwano lwe-WiFi emotweni yethu, siya kuba nakho ukuyibeka naphi na apho sifuna khona. Okukhethwa kwesi sixhobo akunakuba nemida, ubeka.
Uyilo ngenxa yobungakanani bayo luphumelele ngokupheleleyo kwaye lulungile
Ayinayo imida ngenxa yokuba incinci kwaye ayibizi
Kulula kakhulu ukumisela kunye nokusebenza
Ibhokisi ibandakanya zonke izinto eziyimfuneko kunye nonikezelo lwamandla
Ixabiso ngaphandle kokubonelelwa okuthile libonakala liphezulu kum
Qhubeka usebenzisa i-microUSB ngokupheleleyo ngo-2019
(Andikwazi ukufumana ezinye iziphene ...)
Alithandabuzeki elokuba esi sixhobo se-Alexa sinendawo endinayo ngoku, nangona esi sibonelelo sikhethekileyo 25,99 euro Kuphantse ukuthengwa okunyanzelekileyo ukuba unezithethi ezilungileyo ezingezizo ekhaya, ngexabiso eliqhelekileyo le-39,99 kubonakala ngathi kukrelekrele ukukhetha ezinye iindlela, nokuba zisesikweni eAmazon okanye akunjalo. Ungayithenga nakwi kule khonkco Ngexabiso elifanelekileyo kwaye usishiye nayiphi na imibuzo onokuba nayo kwibhokisi yezimvo.
Igalelo leAmazon Echo, uhlalutyo ngexabiso kunye nokubalulwa
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Igalelo leAmazon Echo, sihlalutya isixhobo esiziswa yi-Alexa kuso nasiphi na isithethi